IZINZUZO EZIYISIMANGALISO ZEMPILO EZI-9 ZE-ALOE VERA - PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
I-Aloe Vera: Izinzuzo Zempilo Ezimangalisayo, Imiphumela emibi Nezindlela Zokuyisebenzisa
Izindaba UVishnu Vishal noJwala Gutta bazobopha ifindo ku-Ephreli 22: Bheka imininingwane lapha
Ikhaya Ezempilo Ukudla okunomsoco Nutrition oi-Neha Ghosh Ngu UNeha Ghosh ngoFebhuwari 12, 2020
I-Aloe vera (i-Aloe barbadensis) isitshalo esithandwayo eselaphayo esingumndeni wakwa-Asphodelaceae (Liliaceae). Lesi sitshalo se-aloe vera sithandwa kakhulu ngenxa yezakhi zaso zokulwa namagciwane, ama-anti-inflammatory, antibacterial kanye ne-immunomodulatory. Ngenxa yezindawo zayo eziningi, i-aloe vera iyasetshenziswa ezimbonini zemithi, zezimonyo nezokudla.
I-aloe vera inezinhlanganisela ezingama-75 ezisebenzayo ezibandakanya amavithamini, amaminerali, ama-enzyme, ushukela, i-lignin, i-saponins, i-amino acid kanye ne-salicylic acid enikela ezinzuzweni eziningi zezempilo ezinikezwa yi-aloe vera  .
izithombe ezibuhlungu ezikukhalisa
Amaqabunga e-aloe vera anejeli eguquguqukayo equkethe ama-99% wamanzi futhi agcwele amavithamini, amaminerali kanye nama-amino acid. Ijeli le-aloe vera lingasetshenziswa phezulu esikhunjeni futhi lingadliwa ngendlela yejusi.
Inani Elinempilo Lejusi Ye-Aloe Vera
I-100 g yejusi le-aloe vera iqukethe amanzi ayi-96.23 g, amandla we-15 kcal futhi iqukethe:
3.75 g carbohydrate
3.75 g ushukela
I-8 mg calcium
0.15 mg insimbi
3.8 mg uvithamini C
Izinzuzo Zezempilo Ze-Aloe Vera
1. Yehlisa amazinga kashukela egazini
I-aloe vera ingakhuphula ukuzwela kwe-insulin futhi isize ekuthuthukiseni amazinga kashukela egazini. Ucwaningo lukhombise umsebenzi we-aloe vera gel elwa nesifo sikashukela ezigulini ezinesifo sikashukela. Ngesikhathi kwenziwa ucwaningo, i-1 tbsp yejusi le-aloe vera yanikezwa iziguli ezinesifo sikashukela kabili ngosuku amasonto amabili futhi imiphumela yaba ngcono okukhulu kushukela wegazi namazinga e-triglyceride [okubili] .
kanjani ukunciphisa usayizi webele ngevidiyo ye-yoga
2. Kukhuthaza impilo yomlomo
I-aloe vera iqukethe izakhiwo ezilwa nokuvuvukala nezokulwa namagciwane ezingasiza ukwehlisa ubunzima bezinkinga zamazinyo. Ucwaningo lukhombise ukusebenza kwe-aloe vera gel ekwelapheni i-gingivitis eyenziwe nge-plaque kanye nesifo se-periodontal  .
3. Uphatha ukuqunjelwa
Emithini yendabuko yamaShayina, i-aloe vera isetshenziselwe ukwelapha ukuqunjelwa. Kungenxa yokuba khona kwenkompiyutha ethile ebizwa nge-barbaloin eyaziwa ukuthi inemiphumela yokuhlanza engasiza ekwelapheni ukuqunjelwa  .
singadla ubhanana ngolwesine ngokushesha
4. Kuqinisa amasosha omzimba
I-aloe vera iqukethe izakhiwo zokulwa namagciwane nezokulwa namagciwane ezisiza ukuqala amasosha omzimba ukulwa namagciwane futhi akuvikele ezifweni ezahlukahlukene  .
5. Welapha amanxeba
I-aloe vera gel inezinto zokupholisa amanxeba ezandisa kakhulu ukukhiqizwa kwe-collagen esikhumbeni. Ngenxa yalokhu, ukusha nokusikeka kungaphola ngezinga elisheshayo lapho ijeli le-aloe vera lisetshenziswa phezulu esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, i-aloe vera ikhonjisiwe ukusheshisa ukuphulukiswa kwesilonda ekuhlinzweni kwe-flap periodontal  .
6. Kwehlisa isilungulela
Isifo se-reflux se-Gastroesophageal, esaziwa nangokuthi i-acid reflux yisimo esenzeka lapho isisu se-asidi sibuyela emuva esihlahleni. I-Aloe vera ikhonjiswe ukuthi inekhono lokwehlisa izimpawu zesifo se-reflux sesisu se-gastroesophageal (GERD) esifaka isilungulela, ukuhlanza nokubopha  .
7. Welapha ukushiswa yilanga
Enye inzuzo ye-aloe vera kungasiza ekwelapheni ukushiswa yilanga. Ngenxa yezindawo zokupholisa nezokulwa namagciwane ku-aloe vera, isetshenziswa njengekhambi lokuqeda ukushiswa yilanga. Futhi, ijeli le-aloe vera lisebenza njengesihlangu ekulimaleni kwemisebe esikhumbeni.
8. Kugcina isikhumba sihle
Izinsiza ze-aloe vera ekukhiqizeni i-collagen ne-elastin fibers ezenza isikhumba siqine futhi sivimbele imibimbi. Ama-amino acid nezinye izakhamzimba ezise-aloe vera zithambisa amangqamuzana esikhumba aqinile futhi zisebenza njenge-astringent yokuqinisa izimbotshana zesikhumba. Lokhu kuthuthukisa impilo yesikhumba futhi kunciphise ukubukeka kwemibimbi.
9. Kuthuthukisa impilo yezinwele
I-Aloe vera inketho enhle kakhulu yokukhuthaza ukukhula kwezinwele ngokwemvelo nokumisa ukuwa kwezinwele. Izakhiwo ezilwa nokuvuvukala nezilwa namagciwane zingaphatha ngempumelelo izinkinga zezinwele ezinjenge-dandruff, ukulahleka kwezinwele ngaphambi kwesikhathi, nokuvuvukala kwesikhumba.
indlela yokugcina ubuhlobo bendoda nomfazi
Imiphumela emibi Yokusetshenziswa Kwe-Aloe Vera
Ukusetshenziswa ngokweqile noma ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwe-aloe vera kungadala imiphumela emibi efana nohudo, umchamo obomvu, isifo sokusha kwesibindi, ukwanda kokuqunjelwa kanye nokuqaqamba kwesisu.
I-aloe vera, uma isetshenziswa phezulu, ingadala ubomvu, ukushisa noma ukuluma endaweni, ikakhulukazi kubantu abanesikhumba esibucayi.
Abesifazane abakhulelwe nabomama abancelisayo kufanele bakugweme ukudla i-aloe vera ngoba izovuselela ukucindezela kwesibeletho kwabesifazane abakhulelwe futhi ingadala izinkinga zesisu ezinganeni ezincelisayo  .
Ukusetshenziswa Kwe-Aloe Vera
Faka i-aloe vera gel emanxebeni, ekusikeni nasekushisweni yilanga.
Sebenzisa i-aloe vera mouthwash ukunciphisa uqweqwe.
Faka ijeli le-aloe vera kujusi nama-smoothies
kanjani ukusula izimbotshana ebusweni
ungakhuluphala kanjani evikini eli-1
ungayibopha kanjani i-saree esithombeni se-varalakshmi
isizathu sesayensi sokufaka indandatho yezinzwane